Coral Reef: Reading and my favourites
Shinlay said on April 10, 2010 at 12:20 AM
စာဖတ်ခြင်းဟာ သိပ်ကောင်းတဲ့ ၀ါသနာတခုပါ။
အရွယ်နဲ့ အတူပြောင်းလဲလာတဲ့စာဖတ်ခေါင်းစဉ်လေး
တွေကိုဖတ်ရင်း ကျမဖတ်ခဲ့ဖူးတာတွေ သတိရသွားတယ်။
Rita said on April 10, 2010 at 7:35 AM
တော်တော်များများလဲ တူနေတယ်။ :)
ကလေးစာစောင်တွေ ရုပ်ပြ ကာတွန်း ဝတ္ထုတွေ ဘာသာပြန်တွေ တက်ကျမ်းတွေ...
နောက် Little House on the Prairie ဇာတ်လမ်းတွဲကို စွဲခဲ့တာ... Baldwin မှာ member ​ဝင်ပြီးတော့ ပထမဆုံးငှားဖတ်တဲ့ ဝတ္ထုစာအုပ်က Laure Ingalls ရဲ့ အဲဒီ Little House on the Prairie ပေါ့။
နွေရာသီ ကျောင်းပိတ်ရက်တိုင်း ပြန်ပြန် ဖတ်လေ့ရှိတဲ့စာအုပ်လဲ ရှိခဲ့ဖူးတယ်။ အဲဒါကတော့ မြသိန်းရဲ့ "တော့တိုး-ချန်"။
ခုချိန်ထိလဲ အရင်က ရွှေသွေး တေဇ မိုးသောက်ပန်း နဲ့ ကာတွန်းစာအုပ် အဟောင်းတွေ ပြန်တွေ့ရင် နှစ်နှစ်သက်သက် ပြန်ဖတ်မိတုန်း...
ပိုးဇာ ရဲ့ ကာတွန်းလေးတွေကို သိပ်ချစ်တယ်။
တွတ်ပီ ဗိုက်ကလေး မသေးမျှင် ဆို အပြင်မှာ ရှိနေတဲ့ ဇာတ်ကောင်တွေလို ခံစားမိတယ်။ ဧရာဝတီတိုင်းဘက်မှာ ခဏ နေခဲ့ဖူးတော့ အဲဒီတုန်းက ဓနုဖြူကို ဖြတ်သွားရရင် သူတို့ကို ဖျတ်ခနဲ သတိရနေမိတတ်တာ။
khin oo may said on April 10, 2010 at 10:52 PM
ချစ်ကြည်အေး said on April 11, 2010 at 9:59 AM
ညီမဇွန်လိုပဲ ဖတ်တဲ့ စာအုပ်တွေ အမျိုးအစား ပြောင်းလာတာ သတိထားမိတယ်။ တက်ကျမ်းတွေနဲ့ အင်္ဂလိပ်စာအုပ်တွေတော့ မဖတ်ဖြစ်သလောက်ပဲ...:)
အင်ကြင်းသန့် said on April 11, 2010 at 3:59 PM
ဟုတ်တယ် မမရေ...အခုလောလောဆယ် အခြေအနေမှာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ခဏခဏသုံးသပ်မိနေဖြစ်တာက “ငါ...စာဖတ်အားတွေ လျော့လျော့လာတယ်...” ဆိုတာပါပဲ...
စိတ်သာရှိပြီး မဖတ်ဖြစ်သေးတဲ့ စာအုပ်တွေက ဘေးမှာ ပုံနေပြီ... မမပြောတာမှန်တယ်...မဖြစ်မနေ စာဖတ်ဖို့ ဆိုပြီး အချိန်ဇယားလေးတစ်ခု လုပ်ထားမှနဲ့ တူတယ်...
Anonymous said on April 20, 2010 at 3:39 PM
"အချစ်၏နောက်ဆက်တွဲ စာမျက်နှာများ" ဖတ်ချင်တယ်..
ဂူဂဲ တာ ရှာမတွေ့ဘူး..
ဇွန်မိုးစက် said on April 20, 2010 at 10:08 PM
Anonymous ရေ .. ဇွန်က ဟိုတုန်းက မဂ္ဂဇင်းအခန်းဆက်ဝတ္ထုရှည်အနေနဲ့ ဖတ်ထားတာဆိုတော့ ခုအွန်လိုင်းမှာ ebook ရှိမရှိ မသေချာဘူး။ ရီတာ့ကို မေးကြည့်ရင် သိနိုင်တယ်။
သက်ဝေ said on April 25, 2010 at 1:21 PM
ဆရာမ ဝင်းဝင်းလတ်ရဲ့ အချစ်၏ နောက်ဆက်တွဲ စာမျက်နှာများ PDF ပါ...
Bino said on May 1, 2010 at 12:02 AM
Most of reader same as you,
gradually Improve reading in various kind of books.
But I never absent to read books.
That isagood practice reading some books and continuous study.
How about " NOTHING LASTS FOREVER BY SIDNEY SHELDON"
ဇွန်မိုးစက် said on May 1, 2010 at 7:57 AM
Thanks for reading my post, Uncle Bino. :)
I have read only one book of Sidney Sheldon which is translated by Mg Tun Thu. I love it, 'Master of the Game'. I want to read some more of his books if I got some free time.